Vazhinji mashanu akabatana machining nzvimbo anotora 3 + 2 mamiriro, ndiko kuti, XYZ matatu Linear inofamba masanhu pamwe maviri ABC matatu namasanhu kutenderera kumativi XYZ akabatana azvaitwa. Kubva pane yakakura chikamu, pane kyzab, xyzac uye xyzbc. Zvinoenderana nemubatanidzwa fomu yematemo maviri anotenderera, inogona kuve div ...
Isu tinofanirwa sei kunyatso sarudza mhando yepamusoro CNC lathe vagadziri
Iwo makuru epamusoro-soro mutengesi zviwanikwa zvemakanika ekugadzirisa indasitiri akaiswa muPearl River Delta uye Yangtze Rwizi Delta mudunhu, mune iyo nhamba yeCNC lathe yekugadzirisa vagadziri iri zvakare rakakura kwazvo boka. Saka sei kunyatso sarudza CNC lathe kugadzira manufactu ...
Ndeipi ramangwana reNC machining hunyanzvi uye nzira yekusarudza?
MuChina, CNC machining hunyanzvi hwave hwepasirese mumakore gumi apfuura, uye CNC muchina chishandiso vagadziri vari kutumbuka kwese kwese. Chikumbaridzo cheNC machining emabhizinesi chiri kudzikira uye kuderera, uye tekinoroji kushandiswa kweNC machine hunyanzvi hwunonyanya kushandiswa. ...
Kudzora kwemachina ekururamisa kweCNC lathe mukugadzira
Kudzora kwekukanganisa kwemuchina kweCNC lathe mukugadzira Simba reCNC lathe machining kurongeka inowanzo kukonzerwa nezvikonzero zvinoverengeka zvinotevera, chimwe chikonzero chekushandisa, chechipiri idambudziko rechishandiso, chechitatu kuronga, chechina ndiko kukanganisa kwekutarisa, nhasi Wally machin ...
Maitiro ekuvandudza mashandiro edu ekugadzira kuburikidza neCCC machining Center programming
MuCNC chaiyo machining, maitiro ekuvandudza mashandiro ekugadzira kuburikidza neCCC machining centre programing inzira inodiwa yevashandi vekugadzira. The zvinhu kukanganisa CNC machine kunyatsoshanda zvinosanganisira chokushandisa matambudziko, yechigarire matambudziko, muchina parameters, etc., uye izvi zvinhu affec ...
CNC yekugadzirisa indasitiri mushure megore ra2019, mabhizinesi mazhinji uye mazhinji anonzwa kudzikira kwemirairo yemusika. Maitiro ekugadzirisa iyo CNC yekugadzirisa indasitiri rave musoro wekushushikana kune vakawanda vezvemabhizimusi. Wally michina tekinoroji yanga ichishanda muCNC yekugadzirisa indasitiri kwemakore mazhinji, uye iri als ...
Maitiro ekudzivirira kuitika kwekurovera mukugadzirwa kwemazuva ese kweCCC machining ne lathe
Mukuita kwemazuva ese ekugadzira michina, CNC michina yepakati kugadzira ndiyo yakajairika maitiro, uye zvakare yakanyanya kutsamira maitiro ekugadzirisa zvakakwana. Kana isu tichifarira yepamusorosoro michina yekugadzirisa ekugadzirisa matambudziko, maitiro ekudzivirira iyo CNC michina nzvimbo kubva kurova iyo m ...
Kushanda uye ramangwana maitiro ekuchinjika chigayo machining mune indasitiri
Nhasi, nekukurumidza kukudziridzwa kwemumba michina yekugadzirisa indasitiri, iyo yekuvandudza michina iri zvakare nekukurumidza uye nekukurumidza. Dzokerai azvikuya hwoupenyu kugadzira zvishoma nezvishoma kuva choruzhinji kugadzira michina. Nei vanhu vazhinji vachiona kutendeuka kwekugaya makomputa ekugadzirisa seyakanyanya ...
Maitiro ekusarudza akakodzera feed paramita eCCC lathe muzvikamu kugadzira kuti uone iko kwechigadzirwa kunyatso
Mukuita kwemishini yekugadzirisa zvikamu, CNC lathe ndiyo yakajairika CNC yekugadzirisa michina. Maitiro ekunyatso kuverengera iko iko kwekugadziriswa kwechigadzirwa? Kugadzika yekucheka chikafu parameter yeCCC lathe ndiyo chaiyo nzira yekuona iko kwehunyanzvi zvigadzirwa. Ipapo Wally machin ...
Maitiro ekuongorora kunyatso kweCCC machining centre kotesheni kana uchitenga zvakakwana zvikamu
Kana mabhizinesi akatenga zvikamu zvakaringana, iyo kotisheni yeCCC machining centre yakapihwa nevatengesi haigone kuongororwa zvakaringana, izvo zvinotungamira mukusarudzwa kwevatengesi, zvichikonzera kugadzirwa kwemhando yepamusoro uye kunonoka kwekutakura. Tinofanira sei kunyatsoongorora chitaurwa cnc machine ...
Kururamisa kwemuchina nzvimbo inowanzo kutongwa kubva kune izvo zvinhu
Inoshanda mumakanika ekugadzirisa indasitiri, CNC yekugadzirisa michina yakakosha, inowanzo kunzi machining centre, inozivikanwa se komputa gong. Kunyangwe iyo machining centre inogona kusangana nezvakakodzera zvinodiwa zvekugadzirisa zvigadzirwa, yekutanga ndeyekuti iko kurongeka kwenzvimbo yemuchina pachayo iri h ...
Overview pamusoro CNC machine nemazvo machine
Mukugadzirwa kwemazuva ese, iyo CNC michina chaiyo yatinowanzo taura nezvayo inosanganisira maviri mativi. Chekutanga chinhu ndechekuita kwekutendeseka kwekugadzirisa, uye chechipiri chiitiko iko iko iko kurongeka kwekugadzirisa, inovawo hukasha hwepamusoro hwatinowanzo taura. Ngatitsanangurei muchidimbu ...